Fomba 5 hanalavirana ny fijangajangana ho mpitovo | TOKO VAVAKA
Home Fiainana araka an'Andriamanitra Fomba 5 hanalavirana ny fijangajangana ho mpitovo
Fomba 5 hanalavirana ny fijangajangana ho mpitovo
Androany isika dia hampianatra amin'ny fomba 5 hanalavirana ny fijangajangana ho mpitovo. Ny fijejojejoana dia firaisana eo amin'ny olona tsy mpivady ara-dalàna. Rehefa mivondrona hanao firaisana ny lehilahy tsy manambady sy vehivavy tsy manambady, dia fijangajangana izany. Ny fanambadiana dia zavatra tokony hajaina ary izay rehetra tokony hitranga ao anatin'ny faritry ny fanambadiana dia tokony ho mendri-kaja. Ny bokin'i Ny Hebreo 13: 4 dia manazava bebe kokoa fa ity fanambadiana ity dia manan-kaja amin'ny olona rehetra, ary ny fandriana tsy misy loto; fa ny mpijangajanga sy ny mpaka vadin'olona dia hohelohin'Andriamanitra.
Fahavetavetana amin'ny fijangajangana Andriamanitra, nampitandrina antsika kely Izy ny amin'ny fijangajangana ao amin'ny soratra masina rehefa nanome ny didy 10 tamin'i Mosesy Mpaminany izy. Tsarovy ny soratra masina milaza fa ny vatantsika dia tempolin'ny Tompo ka tokony hiezaka isika hihazona izany ho masina. Ny soratra masina dia manazava bebe kokoa ny filokana amin'ny fijangajangana. Ao amin'ny bokin'i 1 Kôrintianina 6:18 Mandosira ny fahalotoam-pitondrantena. Ny ota rehetra izay ataon'ny olona dia eo ivelan'ny tena, fa izay mijangajanga dia manota amin'ny tenany ihany. Rehefa mirona amin'ny fijangajangana isika, dia tsy manota amin'Andriamanitra ihany, fa manohitra ny fandriana ary manota amin'ny vatantsika. Ny iray amin'ireo voka-dratsy aterak'izany dia ny fampandresena ny fanahin'Andriamanitra amin'ny fiainan'ny olona.
Voka-dratsy ateraky ny fijangajanganaation
Betsaka ny voka-dratsy ateraky ny fijangajangana. Ny sasany amin'ireo mahazatra indrindra dia:
Mampihena ny Fanahin'Andriamanitra ao amin'ny olombelona Izy io
Ny fanahin'Andriamanitra dia fahasoavan'Andriamanitra ho an'ny olona rehetra. Ary tadidio ny soratra masina milaza fa hanohy hiaina amin'ny ota isika ary hangataka ny hitomboan'ny fahasoavana? Ny vatan'olombelona dia mampitoetra ny fanahin'Andriamanitra. Rehefa lasa filaharan'ny andro ny fijangajangana dia manomboka miala tsikelikely ny fanahin'Andriamanitra ary ho avy ny fotoana izay tsy hanana iota-panahy intsony ny olona toy izany.
Mahatonga ny fanatrehan'Andriamanitra lavitra
Rehefa misy lehilahy manaram-po amin'ny ota ara-nofo dia miala amin'ny lehilahy toy izany ny fanahin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Mandritra izany fotoana izany, ny fiainantsika manontolo maha-olombelona dia ny manana koinonia miaraka amin'Andriamanitra. Iray amin'ireo zavatra mety hanimba ny fifandraisana izany ny ota. Arakaraky ny fahotana ataon'ny olona no vao mainka miala aminy ny fanahin'Andriamanitra.
Manimba ny fanatanterahana ny lahatra
Misy tanjona ny amin'ny fisian'ny olona rehetra eto an-tany. Toerana maro no potika teo amin'ny alitaran'ny fahotana ara-nofo. Tsy nahazo ny toerany intsony i Robena tamin'ny naha zaza voalohany azy satria nanao firaisana tamin'ny vadin-drainy izy. Josefa dia tsy ho nanan-javatra lehibe tamin'ny fiainana raha nanaram-po tamin'ny vadin'ny tompony. Jenezy 39:12 dia nisambotra azy tamin'ny lambany izy ka nanao hoe: Avia handry amiko. Ary navelany teny an-tànany ny akanjony, dia nandositra izy ka lasa nihazakazaka nivoaka. Voarakitra ao amin'ny soratra masina fa nandositra avy teo amin'ilay toerana i Joseph.
Ahoana no hanalavirana ny fijangajangana
Ny iray amin'ireo fomba tsara indrindra handresena ny fanahin'ny fijangajangana dia amin'ny alàlan'ny fanampian'Andriamanitra. Ny fahasoavana handresena izany fahatsapana na fakam-panahy izany hijangajanga havoaka ary ny toerana tokana ahafahan'ny lehilahy mahazo izany fahasoavana izany amin'ny alàlan'ny fanampian'Andriamanitra.
Mangataha fanampiana amin'Andriamanitra, lazao ny fanahy masin'Andriamanitra mba hanampy anao handresy ny fakam-panahy amin'ny fijangajangana. Misy hatrany ny fifanolanana eo amin'ny nofo sy ny fanahy. Vonona foana ny fanahy fa ny nofo malemy. Izany dia manazava ny antony tsy maintsy hitadiavan'ny olombelona foana ny fanampian'Andriamanitra.
Ny fomba niantsoan'Andriamanitra Apôstôly an'i Paoly vonjy. Romana 7: 15 Fa izay ataoko dia tsy avelako; fa ny sitrapoko tsy ataoko; fa izay halako, dia izao no ataoko. Mitalahoa amin'Andriamanitra fa hanampy anao Izy.
Ny ankamaroan'ny lavaky ny ota latsaka ao amintsika dia vokatry ny fifehezan-tena. Ny lehilahy tsy mahalala izay hijoroany dia hianjera amin'ny zavatra rehetra. Fantatr'i Josefa hoe iza izy ka izany no antony tsy ahazoany mamorona tanjona eo amin'ny alitaran'ny fahotana ara-nofo. Tena nahay fifehezana izy ary tapa-kevitra ny tsy hanaiky lembenana amin'ny karazana ota fahotana.
Mandra-pahafatin'ny lehilahy iray fifehezana zavatra sasantsasany, dia iharan'izany foana izy amin'ny fotoana rehetra omena azy.
Mampivondrona olona roa i Sec. Izany no antony ilazan'ny Baiboly 1 Kôrintianina 6:16 Sa tsy fantatrareo fa izay miray amin'ny vehivavy janga dia tena iray aminy? Fa "izy roa", hoy Izy, "dia ho nofo iray ihany." mahaiza fifehezana sao hiaraka amin'ny mpivaro-tena.
Mendri-kaja ny fanambadiana. Tokony ho voaloto ny fandriana. Avelao izy hanambady izay efa antitra fa tsy hiroboka amin'ny ota ara-nofo. Raha vantany vao nahatratra taonan'ny fanambadiana ianao, dia aza avela hanery anao hanota ny fakam-panahy amin'ny fijangajangana. Raha tokony hirona amin'ny ota ara-nofo ianao dia aleo milamina amin'ny fanambadiana.
Ny fanambadiana dia ny fiarahan'ny lehilahy sy ny vehivavy ho tonga mpivady. Mathew 19: 5 ka nanao hoe: Ary noho izany ny lehilahy dia handao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny, ary dia ho nofo iray ihany izy roroa?
Ny soratra masina milaza ny fahatahorana ny fiandohan'ny fahendrena. Ny fialana amin'ny fijejojejoana dia tsy hery. Mila fahendren'ny ray ny olona hahafahany mamantatra ny fakam-panahy ary mandositra izany. Ary ny fahendren'ny Tompo dia tafiditra ao anaty tahotra ho azy. Rehefa matahotra ny Tompo isika dia mankatoa ny didiny rehetra na mety amintsika na tsia ny manao izany. Ny soratra masina dia nahatonga antsika hahatakatra fa ny iray amin'ireo didy nomen'Andriamanitra antsika dia ny fifadiana ny fijangajangana. Izany dia satria Andriamanitra dia maniry ny hanangana firenena misy olona masina.
Na izany aza, rehefa tsy eo ny fahatahorana ny Tompo dia lasa sarotra be ny tsy hijangajangana. Tokony hatahotra ny Tompo tahaka ny ahitantsika azy isika, tsy maintsy matahotra azy toy ny eo ivohoko isika. Ny bokin'i Ny Salamo 119: 11 dia milaza ao am-poko ny teninao mba tsy hanotako aminao. Tehirizo ao am-ponao ny tenin'i Jehovah mba tsy hanotanao aminy.
Previous lahatsoratraFomba 5 hanalavirana ny fanitsakitsaham-bady amin'ny fanambadiana
Next lahatsoratraFomba 5 handresena ny tahotra amin'ny maha mpino
Tertulien marlon 18 jona 2021 Amin'ny 8:55 hariva
STUDIE NO DUIDELIJK
Ny vavaka manafaka dia manasongadina ny fandresena ny fanahin'ny fivavahana
Famantarana 5 hahafantarana fa manana fiantsoana masina ianao